သန္ငေသားဆေးထိုးခြင်း သင်တန်းကာလ 1 လ နှင့်3လ ဖြစ်ပါသည်။ - intouchmedicare
သန္ဓေသားတားဆေးထိုးခြင်း (Injection Contraceptives)
သန္ဓေသားတားဆေးထိုးခြင်းသည် အများအားဖြင်းလုပ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးသောက်ဖို့မေ့ခြင်းကိစ္စကိုမလိုပါတော့သည်၊အဲ့တာကြောင့်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့သင့်လျော်ပါသည်၊ထို့နောက်ကိုယ်၀န်တားနိုင်ခြင်းအရည်အသွေးမြင့်မားပါသည်။၎င်းသည်ဉကျခြင်းကိုဟန့်တားစေပြီး သုတ်ရည်၀င်မသွားလောက်အောင်သားအိမ်ခေါင်းအချွဲကိုထူစေပါသည်၊ဒါပေမဲ့အချိန်၁-၃လအထိသာလျှင်ကြာရှည်ခံပါသည်။ထို့နောက်ဆေးကိုအမြဲတမ်းမထိုးပါက မိမိအတွက်ကိုယ်၀န်ရနိုင်ခြေရှိစေပါသည်။
တားဆေးထိုးခြင်း (Injection Contraceptives)
ပေါင်းစပ်ထားသောတားဆေးestrogen နှင့် progestogen ဟော်မုန်းများပါ၀င်သည်။ ဒီအမျိုးစားသည် ၁လ အတွင်းကိုယ်၀န်ရှိခြင်းကိုကာကွယ်စေနိုင်ပါသည်၊ပုံမှန်အားဖြင့်လက်မောင်းသို့မဟုတ် ဖင်မှာထိုးပေးပါသည်။ထို့နောက် ဒီဆေးသည်ပုံမှန်အတိုင်း ရာသီလာစေပါသည်။
progestogen ဟော်မုန်းပါတားဆေးများသည် ၃လ အတွင်းကိုယ်၀န်ရှိခြင်းကိုကာကွယ်စေနိုင်ပါသည် ၊ပုံမှန်အားဖြင့်လက်မောင်း သို့မဟုတ် ဖင်မှာထိုးပေးပါသည်။၎င်းသည်မိမိရာသီမူမမှန်ခြင်း ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်၊ဉပမာအားဖြင့် စစချင်းသည်ရာသီလာလိုက်ပျောက်လိုက်နှင့် နောက်ပြီးအနည်းငယ်သာလျှင်လာလိိမ့်မည် နောက်ဆုံး၌ရာသီပျောက်သွားစေနိုင်ပါသည်။
၃လစာဆေးထိုးခြင်းနှင့် ၁လစာဆေးထိုးခြင်းသည် ဘယ်တစ်ခုပိုကောင်းပါသလဲ?
ပေါင်းစပ်ထားသောတားဆေး (estrogen နှင့် progestogen ဟော်မုန်းများ)
ထိုးဖို့ရန် လတိုင်းချိန်းပါသည်၊ ၁လ ၁ကြိမ်
နို့တိုက်နေတဲ့မိခင်နဲ့မသင့်‌တော်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိခင်၏နို့ရည်ကိုခြောက်ပြီးနည်းပါးစေလိမ့်မည်။
ဟော်မုန်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းသာလျှင် (progestogen ဟော်မုန်း)
ထိုးဖို့ရန် ၃လ တစ်ကြိမ်ချိန်းပါသည်
ရာသီလာလိုက်ပျောက်လိုက်နှင့် သို့မဟုတ် ရာသီမလာခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည် (ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေပါသည်)
အခြားသောလက္ခဏာများ ဉပမာ ကောင်းမူးခြင်း၊ကောင်းကိုက်ခြင်း၊ရင်တုန်ခြင်း၊စိတ်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊မောပန်းခြင်
" အကျဉ်းချုပ်။ ။၁လစာတားဆေးနှင့်၃လစာတားဆေးများသည်နှစ်ခုလုံးအရည်အသွေးမြင်းမားမှုရှိပါသည်၊ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးပါရှိပြီးကွဲပြားသွားပါသည်၊အဲ့တာကြောင့်ဘယ်တစ်ခုကပိုကောင်းလဲဆိုတာတိတိကျကျအဖြေမရှိပါ။လူနာပေါ်၏အဆင်ပြေမှုပေါ််သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ "
၁လစာတားဆေးထိုးခြင်း စတင်သောစျေးနှုန်း 499ဘတ်
၃လစာတားဆေးထိုးခြင်း စတင်သောစျေးနှုန်း 399ဘတ်
လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာမကာကွယ်ဘဲရ‌အောင်လို့တား‌ဆေးကိုရာသီလာတဲ့ချိန်၅ရက်အတွင်းမှာထိုးသင့်ပါသည်၊‌နောက်ပြီးစထိုးတဲ့ရက်မှာကိုယ်၀န်မဆောင်ဘူးလို့‌သေချာအောင်၊အကယ်၍ရာသီလာတဲ့ချိန်မဟုတ်၍ထိုးရင် 7ရက်‌နောက်ပိုင်းမှ စိတ်ချစွာဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိနိုင်ပါသည်၊တား‌ဆေးထိုးခြင်းသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်‌သောရောဂါကိုမကာကွယ်‌စေဘူး အဲ့တာ ကြောင့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်‌သောရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုလိင်ဆက်ဆံချိန်မှာကွန်တုံးကိုသုံးသင့်ပါသည်
၃လစာဆေးထိုးတာနှင့် ၁လစာ‌ဆေးထိုးတာ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ ?
- ၁လစာ‌ဆေးထိုးခြင်းသည်ပေါင်းစပ်‌ဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး (အီစထရိုဂျင်နှင့် ပရိုဂျက်စတင် နှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်) ၁ လ၁ကြိမ်ထိုးရန်ချိန်းလိမ့်မည်။ရာသီပုံမှန်အရလာလိမ့်မည်။
- ၃လစာ‌ဆေးထိုးခြင်းသည် ‌ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သောပရိုဂျက်စတင်တခုတည်းပါ၀င်ပါသည်၊၃ လတစ်ကြိမ်ထိုးရန်ချိန်းပါသည်၊ရာသီ‌ပျောက်သွားနိုင်သည်၊ဒါ‌ပေမဲ့ကျန်းမာ‌ရေးကိုမထိခိုက်ပါ။
လစာတား‌‌ဆေးထိုးပြီး၃လစာပြောင်းထိုးလို့ရပါသလား (သို့) ၃လစာထိုးပြီး၁လစာ‌ပြောင်းထိုးလို့ရပါသလား
ပြောင်းထိုးမယ်ဆိုရင် နောက်တ‌ခေါက်ထိုးဖို့ချိန်းထား‌သောရက်အတိုင်းလာရပါမည်၊ချိန်း‌သောရက်မတိုင်မီလာနိုင်ပြီးချိန်းရက်‌‌ကျော်ပြီး နောက်ပိုင်းမလာသင့်ပါ
တား‌ဆေးထိုးခြင်းသည် ရက်ချိန်းအရထိုးရမလား၊ရက်ချိန်းမတိုင်ခင် သို့မဟုတ် ရက်ချိန်း‌ကျေ်လို့ရပါသလား ?
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရက်မတိုင်ခင်ထိုးလိုပါက ‌ယေယျအားဖြင့်၁လစာ‌ဆေးလတိုင်းထိုးရမည့်ဟာသည် ရက်ချိန်းမတိုင်ခင်၇ရက်ကြိုထိုးနိုင်ပြီး ၃လစာ‌ဆေးသည် ရက်ချိန်းမတိုင်ခင် ၂ပတ်ကြိုထိုးနိုင်ပါသည်၊